DAAWO: Kenya oo Amar cusub kusoo rogtay Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aada Nairobi
August 31, 2019 NEWS 1
Xilli Muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ku qabaan dhibaatooyin waa weyn marista Magaalada Wajeer oo lagu baaro, islamarkaana laga siiyo Viisaha dal ku galka dalka Kenya intooda wata Baasaboorka diblomaasiga ayaa dowladda Kenya haddana waxa ay shaacisay […]
DAAWO+XOG: Ma dhab-baa In Diyaarad hub siday ay ka dagtay Magaalada Qardho, Yaase loo waday Hubkaas?
August 30, 2019 NEWS 2
QARDHO(P-TIMES) – Warar kooban oo ay heshay Shabakada Puntlandtimes.com waxay ku ogaatay in duulimaad diyaaradeed oo ka soo kicitay dalalka Khaliijka, gaar ahaana saldhig ciidamada Imaaraatku ay leeyihiin oo kuyaala dalkaas uu soo gaaray magaalada […]
DAAWO VIDEO:Faysal cali Waraabe”Waxaan ka Qeyb Galayaa Caleema Saarka Madaxweyne Axmed Madoobe,Kismaayo baan Tagaya”
August 30, 2019 shiine maxamed 0
Hogaamiyaha Xisbiga Mucaaradka Soomaliland Faysal cali Waraabe Ayaa Markii Ugu Horeyey Sheegay Inuu ka Qeyb Galayo Caleema Saarka Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed islaam (Axmed Madoobe) Isagoo Ka Hadlayey Hargeysa waxaa Uu Ka Hadlay Siyaasada Soomaaliya […]
AKHRISO: Dalalkii u hiiliyey Soomaaliya, ee kahiiliyey Kenya, Qaraarkii 1261
Lix kamid ah dalalka ka tirsan golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa ka hor yimid qaraar ay Kenya ku dooneysay in Al-Shabaab lagu daro diiwaanka madow, kaas oo xannibaad adag saari lahaa ururka, laga soo […]
DHAGEYSO: Waa kuma Jeneral Odawaa Yuusuf Raage, Taliyihii Dagaalka tooska u galay?
Toddobaadkan waxaa xilka taliyennimada ciidamada dawladda Soomaaliya la wareegay Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage oo askarinnimada qortay 14 sano ka hor. Jeneral Odawaa ayaa xilka kala wareegay Jeneral Daahir Aadan Cilmi Indha-Qarshe oo xilka soo hayey […]
DAAWO: Madaxweynaha Soomaaliya oo soo gabagabeeyey safarkiisii Japan, Muqdishana ku wajahan
TOKYO(P-TIMES) -Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo gabagabeeyey safar uu ku joogay dalka Japan, halkaas oo uu ka socday shirka Afrika iyo dalka Japan dhexmarayey, kaas oo sannadkan looga hadlay arrimaha Iskaashiga ee dalalkan […]
DAAWO: “Qofna Dhexdhexaad kama noqon karro Kiiska Badda Soomaaliya” DF Soomaaliya
MUQDISHO(P-TIMES) – Dawladda Faderaaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in kiiska dacwadda badda ee u dhaxeysa Soomaaliya & Kenya ay bilaaban doonto maalmaha ay mudeysay Maxkamadda Caalamiga ah ee ICJ, isla markaasna garab istaag looga baahan yahay […]
DAAWO: 10 Wasiir oo katirsan Puntland ayaa gaaray Badhan & Wararkii u dambeeyey
Magaalada Badhan ee gobolka Sanaag, waxaa maanta gaadhay wafti ka kooban 10 wasiir, xildhibaanno iyo mas’uuliyiin kale oo Puntland ah. Ujeedka socdaalkooda ayaa la xidhiidha dhisidda golaha deegaanka degmada Badhan, kormeer iyo la kulmidda ciidamada dhawaan […]
XOG+DAAWO: Maxay Wasiiradda DF Soomaaliya xalay uga baaqsadeen Xil la wareegidii Gudoomiyaha gobalka Banaadir?
MUQDISHO(P-TIMES) – Dhammaan Wasiiradda dawladda Faderaalka ee Soomaaliya iyo xubnaha baarlamaanka ee taageersan Madaxtooyada Soomaaliya ayaa xalay ka baaqsaday ka qeybgalka xil la wareegida gudoomiyaha cusub ee gobalka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed […]
SAWIRRO+XOG: AMISOM oo la wareegaysa Ammaanka Dhuusa-Mareeb & Taliyaha ciidankaas oo gaaray.
DHUUSA(P-TIMES)- Taliyaha guud ee ciidamada AMISOM Lt. Gen. Tigabu Yilma Wondimhunegn oo u dhashay dalka Itoobiya ayaa soo gaaray subaxnimadii hore ee maanta magaalada Dhuusa-Mareeb ee xarunta Galmudug oo ah halka ay ka dhacayso doorashada […]
Senator Ilhan Omar oo sheegtay in dil loogu Hanjabay.
WASHINGTON(P-TIMES)- Senator Ilhan Cumar oo ah gabar kasoo jeeda Soomaaliya, kana tirsan xildhibaanada Xisbiga Dimuquraadiga ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in ay maalmihii u dambeeyey la kulmaysay Hanjabaado cunsuriyad ah oo uga imaanaya taageerayaasha Donald […]
DAAWO: Yaa Al- Shabaab u sahla in ay Lacago ka aruursato Ganacsiga Muqdisho & Gobalada Soomaaliya.
MUQDISHO(P-TIMES) – Baaris gaar ah oo ay sameysay Idaacada Codka Mareykanka ee VOA-da ayaa lagu ogaaday in ay kooxda AL- Shabaab Malaayiin Dollar bil kasta ka hesho Canshuuro ay ka qaado Ganacsatada Soomaaliyeed ee kunool […]
AKHRISO: Madaxweynaha Jubbaland oo warqad layaab leh u diray M/weyne Farmaajo.
KISMAAYO(P-TIMES) – Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo ay dib dhawaan u doorteen mudanayaal katirsan baarlamaanka Jubbaland oo lasoo xulay ayaa warqad u diray Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taas oo ku wajahan […]
DHAGEYSO: Cumar Finish oo ku dhawaaqay war ka farxiyey Shacabka gobalka Banaadir
MUQDISHO(P-TMES) – Gudoomiyaha cusub ee gobalka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) oo xalay la wareegay xilka gudoomiye-nimada gobalka Banaadir ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqay in uu wax ka bedel […]
Maxay Ka Hadleen Wasiirada Arimahada Dibada Somaliya Iyo Dhiggiisa Japan
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Mudane Danjire Axmed Ciise Cawad, ayaa intii lagu guda-jiray kaltanka todobaad ee Shir Madaxeedka TICAD ayuu shir doceed la yeeshay dhiggiisa Japan Mudane Tarō Kōno, isaga oo kala hadlay […]
SIR LA HELAY+DAAWO: Sidee Shabaab Malaayiin Dolar uga qaadaan Ganacsatada & Dekeda Muqdisho.
Xog+AKHRISO: Habraaca Dacwada Badda Soomaaliya iyo Kenya .
HAB RAACA SIDA AY U DHICI DOONTO DACWADDA U DHAXAYSA SOOMAALIYA IYO KENYA Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ee fadhigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Nederleand ayaa qaban doonta dhageysiga dacwadda xadeynta xuduud badeedka labada […]
Golaha Wasiiradda Soomaaliya oo maanta kulan gaar ah ka yeeshay Arrimaha Jubbaland.
Golaha Wasiirraada Xukuumadda Federaalka ayaa taageeray go’aankii Wasaaradda arrimaha Gudaha ee 22kii bishan Agoosto ay ku caddeysay inaysan oqoonsaneyn natiijooyinkii kasoo baxay doorashooyinkii aan loo marin habraaca saxda ah ee ka dhacay Kismaayo. Golaha ayaa […]
AKHRISO: Maxaa ka soo baxay kulankii Golaha Wasiiradda Puntland?
Madaxweyne Ku-xigeenka dowladda Puntland, Ahna ku-simaha Madaxweynaha Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa shir guddoomiyey shirka Golaha Wasiirada Puntland oo looga hadlay arrimo muhiim ah.
DAAWO: Xaaf oo ka hor yimi sida ay DFS ku dhiseyso Galmudug, kuna dhawaaqay in uusan aqoonsaneyn.
HOBYO(P-TIMES) – Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf oo ka hadlayay magaalada Hobyo ayaa sheegay in ay wali jirto rajo wanaagsan oo dib loogu dhisi karro Galmudug, wuxuuna sheegay in waxa kasocda Dhuusa-Mareeb aysan aheyn wadiiqadii […]